Yohimbine hcl ntụ ntụ: Ụdị, Uru, Mmetụta, Nyocha
/blog/Yohimbine/Yohimbine ntụ ntụ: Ụdị, Uru, Mmetụta, Nyocha
Ihe na 04 / 13 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Yohimbine.
Ihe niile banyere yohimbine ntụ ntụ
1.yohimbine ntụ ntụ
2.Mechanisms-yohimbine ntụ ntụ
3. Kedu ka yohimbine ntụ ntụ si arụ?
4.Howụ ka ị na-ewe ntụ ntụ yohimbine
5.Ogologo oge ole ka yohimbine ntụ ntụ dị?
6.What bụ yohimbine ntụ ntụ? Uru na mmetụta
Ngwunye 7.yohimbine bụ ntụ ntụ dị arọ dị arọ?
8.Idi yohimbine ntụ ntụ Nchekwa?
9.yohimbine ntụ ntụ
10.yohimbine ntụ ntụ mmetụta
11. yohimbine ntụ ntụ vs. Yohimbe
12.Precautions na yohimbine ntụ ntụ Ntụkwasị
13.yohimbine ntụ ntụ Nyocha
14.yohimbine ntụ ntụ Nsonaazụ
15.N'ihi gini ka ndi mmadu na-eme ka ha nwee mmuo uhimbine?
16. Ihe kachasị na-eme ka ọ bụrụ ntụpọ
yohimbine ntụ ntụ video
I. yohimbine ntụ ntụ isi Characters:
aha: yohimbine ntụ ntụ
1. yohimbine ntụ ntụ
uhimbine hcl uzuzu bu aha nke osisi osisi a na-achicha di na mpaghara etiti anyanwu Afrika. Akara yohimbe nwere ogwu a na-akpọ yohimbine ntụ ntụ, nke a na-eji mee ọgwụ. uhiebine a na-edozi (Aphrodyne, Yocon) bụ ụdị nke elhimbine hcl ntụ nke bụ ọgwụ ọgwụ na US.
ihe mgbakwunye na-eme ka yohimb belata ma ọ bụ yohimbine ntụ ntụ dị ka onye na-arụsi ọrụ ike. Otú ọ dị, ụfọdụ n'ime ngwaahịa ndị a nwere ike ọ gaghị enye ihe ọmụma ziri ezi banyere ọnụego yohimbine na mgbakwunye ahụ. Ọzọkwa, ụfọdụ ntụpọ yohimbe depụtara ndepụta nke yohimbine dịka ihe mgwa ihe. ihe na-ekpo ọkụ na-ekpofu ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eri nri na US.
A na-eji ụbụrụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ enwe mmekọahụ, maka mmezigharị erectile (ED), nsogbu mmekọahụ nke ọgwụ maka ịda mbà n'obi na-akpọ ndị na-eme ihe nchịkwa-serotonin rehibiting (SSRIs), na nsogbu mmekọahụ zuru oke ma nwoke ma nwanyị. A na-ejikwa ya maka ime egwuregwu, mgbapụta ọnwụ, ike ọgwụgwụ, ihe mgbu obi, ọbara mgbali elu, ọbara mgbali elu nke na-eme mgbe ebili ọtọ, ọrịa mgbu ọrịa shuga, na ịda mbà n'obi tinyere ọgwụ ndị ọzọ.
2. Uzo-yohimbine ntụ ntụ
bọọlụ XML-1 na alpha-2 adrenoceptors, na-arịwanye elu adrenaline na dopamine ma na-ebelata isi ogo serotonin. Idochi ndị nnata a na-eme ka ọbara mgbali elu, na-ahapụ insulin, ma na-ebelata shuga shuga.
Serotonin na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, 1B, -1D, -2A, na -2B (5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT2A, na 5-HT2B) ndị natara, na dopamine-2 na dopamine-3 (D2 na D3) ndị natara.
3. Kedu ka yohimbine ntụ ntụ HCL ntụ ntụ si arụ ọrụ?
Akwukwo HCL a na-eji ya eme ihe iji nyere aka n'ibelata aru. Ọtụtụ n'ime anyị na-agbaso mgbagha a, ọ bụghị nsogbu dị mfe iji dozie, ya mere enyemaka ọzọ na-aba uru mgbe nile. Ugbu a, enwere ọtụtụ bekee n'ahịa nke na-arụ ọrụ ka mma ma ọ bụ ka njọ na-akwado mgbatị dị arọ. Otú ọ dị, ọtụtụ mgbe, ha na-eme nhọrọ ma ọ bụ na-emetụta nsogbu ahụike ndị ọzọ. Uhimbine hcl ntụ ntụ HCL ntụ ntụ dị na ogige dị otú ahụ? Ọ na-egosi na ọ bụghị, ma e wezụga enyemaka dị irè ma dị irè nke abụba ọkụ, ọ na-akwadokwa usoro ọnụọgụ abụọ nke anụ ahụ.
icha uhimbine HCL uzuzu bu uzo di iche iche nke na akwado ihe di mkpa. Ọ bụghị nanị na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ dị egwu n'ime usoro ịbelata abụba ahụ, mana ọ na-emekwa ka enwe mmekọahụ karị (karịsịa na ụmụ nwoke). Ọ na - eme ka mgbali elu dị na mpaghara kachasị mkpa (ụbụrụ), nke chọrọ nkwụsị pụrụ iche. Maka nke a, enwere mmetụta dị ntakịrị.
Otú ọ dị, a ghaghị icheta na ntụpọ elichabine hcll bụ ntụpọ kachasị dị irè n'ụdị hydrochloride, na a ghaghị ịkwụ ụgwọ ahụ maka àgwà nke onye ahụ na-emepụta iji zere nhụsianya n'ime ọdịnaya nke ihe arụ ọrụ ahụ, nke nwere ike na-emetụta mmetụta nke mgbakwunye.
4. Kedu ka ị ga - esi mee ka ị na - ewere HCL ure? (Kwunye yohimbine ntụ ntụ HCL onu ogwu)
• 14 mg maka onye 150lb
• 18 mg maka onye 200lb
• 22 mg maka onye 250lb
Mgbakwunye kachasị dị irè n'etiti nri ma ọ bụ n'oge obere oge na-ebu ọnụ.
E kwesiri iji nlezianya mee ihe n'ogo dị arọ, ebe ọ bụ na usoro obi nwere ike ọ gaghị adị njikere ịmepụta onye na-akpali akpali dịka ntụpọ na-ekpo ọkụ HICL dịka yohimbine. Mgbe ị na-eme ka ntụ ntụ HCL dịkwuo ọkụ na-ebuwanye ibu maka oge mbụ, malite mgbe ọkara ọkara ma chọpụta ndidi tupu ị gaa n'ihu.
E kwesịkwara iji nlezianya mee ihe ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe mgbakwunye nwere ntụpọ lichabine hcl na ntụpọ HCL ma ghara idepụta ihe dị iche iche yohimbine ntụ ntụ na-eme ka HCL lichaa, ma ọ bụrụ na ha emee, mkpụrụ ndụ ahụ bụ kpọmkwem site na 25-150% nke dose a depụtara. Ebe ọ bụ na usoro onunu ogugu nwere ike ibu elu karịa edepụtara, nke a bụ ihe ọzọ mere ị ga-eji malite obere ọgwụ.
Mgbe ejikọta yohimbine HCL ntụ ntụ na ndị ọzọ na-akpali agụụ mmekọahụ mmadụ, ọkara nke abụọ ma ihe mgbakwunye na-arụ ọrụ ruo n'omume a tụrụ aro iji nlezianya, dịka ihe ntinye abụọ nwere ike imekọ ihe.
5. Ogologo oge ole ka yohimbine ntụ ntụ dị?
uhieline ntụ ntụ nwere oke mkpụmkpụ ọkara ndụ nke naanị gburugburu 1 - 1.5 awa. Nke a pụtara na mgbe ọ gafere oge 3 mmetụta ya ga-apụrịrị kpamkpam. Ogologo mmetụta ndị a na-adabere na mgbochi gị na ihe ị nwere n'ime afọ gị. A na-atụ aro ka ịṅụ yoclubine lcl na ntụ nke na-emeghị ihe ọ bụla iji mee ka ọ dịkwuo mma ma ọ bụrụ na mmetụta ahụ dị ogologo.
6. Kedu ihe bụ ntụ ntụ yohimbine? Uru na mmetụta
(1) Pụrụ iji nyere aka ịnọgide na-enwe ahụ ike
Otu n'ime uru kachasị elu nke yohimbine ntụ ntụ bụ na ọ nwere ike inye aka ịnọgide na-enwe ahụ ike. N'otu nnyocha, e nyere ndị na-egwu bọl abụọ na-enye yohimbine ntụ ntụ na iri abụọ ọzọ nyere ebebo. Akara yohimbine ntụ ntụ nwere akụkụ dị ala nke dị ala na njedebe nke izu atọ. Ọ naghị emetụta ọkpụkpụ muscle ma ọ bụ egwuregwu n'egwuregwu na ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ha kwuru ọhụụ ọ bụla.
N'ọmụmụ ihe ọzọ, ụmụ nwanyị iri abụọ na-enwe ọ bụla nwere izu ule nke izu ụka iji nwalee mmetụta nke uclidine hcl ntụ. Ha niile riri nri dị ala (1000 kcal / ụbọchị) maka oge ikpe ahụ. Ọkara nke ụmụ nwanyị nyere ebebo na ọkara nke ọzọ nyere yohimbine ntụ ntụ ugboro anọ kwa ụbọchị. Ìgwè nke dị na yohimbine nwere nnukwu mmelite dị mma na njedebe nke ikpe ahụ. yohimbine hcl ntụ ntụ yiri ka ọ na-akwalite usoro ebere ọmịiko. Ọzọkwa, ọ dịghị otu n'ime ụmụ nwanyị ahụ kọrọ mmetụta ọ bụla n'oge ikpe ahụ.
(2) Nwere ike inye aka ịkwalite ịba mma na nwoke na nwanyị
eke aphrodisiac Liftmode si yohimbine ntụ ntụ ntụ ntụ: 98% + dị ọcha
Nyocha sitere n'aka 2001 lere anya na nyocha niile banyere yohimbine hcl ntụ ruo n'oge ahụ. Ndị nnyocha ahụ chọpụtara na a ka nwere ihe ole na ole nyochaa nke ọma iji nwalee mmetụta nke yohimbine ntụ. Otú ọ dị, n'ime nnyocha ndị ha lere anya na egosiputa na ntụl yohimbine nwere mmetụta dị oke mma na libido nwoke. N'ụzọ doro anya, ọ nyeere aka ịkwalite ike ike mmekọahụ na ụmụ nwoke. Na nyocha nile, uhimbine ntụ ntụ dịtụghị na mmetụta ndị na-emekarị n'usoro.
Ọmụmụ ihe ọzọ na-eji yohimbine ntụ ntụ na L-Arginine, amino acid zuru oke, iji nyere aka kwalite agụụ mmekọahụ nwoke. A na - enye mmadụ iri anọ di na nwunye n'etiti 25 na 50 na ogo dịgasị iche iche nke ike ịmalite mmekọahụ ma placebo ma ọ bụ yohimbine hcl ntụ na oge izu ụka 4. Ndị nchọpụta ahụ chọpụtara ọdịiche dị oke n'etiti ìgwè dị iche iche mgbe izu 4 gasịrị, n'ihe banyere ahụike mmekọahụ.
(3) Pụrụ inwe ike iji melite arụmọrụ
A ka nwere mkpa maka ịmụtakwu ihe na-akpata yohimbine ntụ ntụ na arụmọrụ akpịrị. Otú ọ dị, ọtụtụ nchọpụta egosiwo na ọ nwere ike ịnwe ike inye aka melite cognition. Dịka ọmụmaatụ, otu nyocha nyocha nke isiokwu ya bụ "Ndị na-eme ka ịchọta ihe banyere ọrịa na-agwọ ọrịa" depụtara yohimbine hcl powder HCL powder dị ka onye nwere ike ịmepụta botanical iji kwalite cognition ma belata nrụgide.
Ọzọkwa, nnyocha e mere na-emetụta mmetụta nke ịtụnanya ma na-atụ egwu mmetụta uche mmadụ na ncheta egwu. Ndị nnyocha ahụ chọpụtara na yohimbine hcl ntụ ntụ kpaliri ahụ mmadụ iji mepụta epinephrine na norepinephrine. Ha chọpụtakwara na uhọnbine ntụ ntụ HCL kwalitere oge mgbake site na mgbaàmà nke ụjọ.
① yohimbine hcl ntụ ntụ anaghị enyere aka na abụba abụba na oke ọ bụla bara uru. O yighị ka ọ ga-enyere gị aka ma ọ bụ nwee ihe ọ bụla na-ere ọkụ na abụba nke na-enye gị ohere ịchụpụ abụba gị na-enweghị isi n'emeghị ka mbelata ike ọgwụgwụ.
② yoishbine ntụ ntụ nwere ike ibute ọnwụ dị arọ, ma nke a bụ naanị obere mmiri ọnwụ n'ihi yohimbine hcl ntụ ntụ diuretic utịp.
③ yohimbine ntụ ntụ nwere ike inyere ntakịrị aka ma ọ bụrụ na ọ na-aba uru, ma o yikarịrị ka ọ bụ naanị site na pasent ole na ole na nnukwu mmefu ego na nke a na-eme na mpaghara ọnụ.
7. ude uhiebineine bụ ntụ ntụ dị arọ dị arọ?
Kucio na ndị ọrụ mere nnyocha na-achọ azịza nke ajụjụ a. N'akụkọ ha na-eme nchọpụta, nke a kpọrọ, "ude mmiri na-eme ka ọkpụkpụ HCL dị ka a ọgwụ ọjọọ? "Ha chọpụtara azịza dị mma. Na ọmụmụ ihe a, ụmụ nwanyị iri abụọ na-achịkwa na 3 kaadị 1,000 maka nri kwa ụbọchị. Mgbe oge 3 a gasịrị, e nyere ndị na-enye 10 ntụ ntụ na-ekpo ọkụ na HCL ma na-enye 10 ọzọ ohere maka izu atọ ọzọ, na mgbakwunye na 1000 Kalori kwa ụbọchị.
Ha choputara na ogwu ugbo ocha na-eme ka HCL choo ibu uba; N'ihu 3.55 kilo ugwo nke a na-efu n'ime uhie nke yovimine na uzo HCL na uzo 2.21 kilo uzo nke efu n'ime ebe a. Otú ọ dị, enweghi mmetụta dị ịrịba ama na egbugbere ọnụ lipolysis, ọ dịghịkwa ọgwụgwọ na ntụpọ yohimbine nke HCL na-egbu oge ọnụahịa nke ihe efu. Buru n'uche na, ebe ọ bụ na ihe dịka kilogram abụọ na-eme ka okpukpu abụọ nke na-eme ka ọ ghara ịdị irè, ọ dịghị ihe ọ bụla dị na ya ma ọ bụrụ na ọ furu efu, anụ ahụ ma ọ bụ ahụ ike, nakwa na a chọpụtara na ihe ndị a na ụmụ nwanyị na-anọkarị, na-eri 1000 Calories kwa ụbọchị.
Ọzọkwa, e nwere ihe ndị ọzọ na-edozi ahụ nke nwere ike ibute ọnwụ, ma ole na ole ma ọ bụ enweghị mmetụta ọ bụla. Ndị nnyocha ahụ kwubiri na nyocha ọzọ dị mkpa iji chọpụta na ị ga-eji ihe mgbakwunye ndị na-emechi mkpụrụedemede 2-receptor na-eme ihe dị ka nlekọta nchịkọta maka ọgwụgwọ oke.
Ndị ọrụ na ndị ọrụ na-enyocha ihe mmetụta nke caffeine na ntụ ntụ na-acha ọcha na-eme ka HCL na-arụ ọrụ gbasara obi na ọnụego ọnwụ. Iji mee nke a, ha kewara ụmụ nwanyị dị iri abụọ na asaa, n'ime ìgwè 9 atọ. Òtù mbụ ahụ nwetara naanị obere calorie nri (400 Calories kwa ụbọchị) na placebo. Ndị nke abụọ natara otu nri ahụ, na ọgwụgwọ ọgwụgwọ caffeine. Ndị nke atọ natara otu nri ahụ, na ọgwụgwọ caffeine nke e ji mee ihe na 2 otu, tinyere ntụ ntụ nke na-eme ka ọkpụkpụ Hhimline.
Ngwọta ahụ diri ụbọchị 10. Ná ngwụsị nke ọmụmụ ahụ, ndị nchọpụta ahụ mere ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akụkụ ahụ dị iche iche dị iche iche dị iche iche, na-enweghị ntụgharị ọnụ dị iche iche n'etiti otu; 1 nke X furu efu 3.3 kilogram nke oke ahụ, otu 2 na-efu 3.5 kilogram nke oke ahụ, otu 3 weere 3.4 kilogram nke oke ahụ. Ọ bụ ezie na e nweghị nchọpụta dị ịrịba ama dị n'etiti òtù ndị ahụ, ndị nnyocha ahụ kwuru na ọmụmụ a bụ nanị 10 ụbọchị, nakwa na isiokwu ndị ahụ nọ na-eri obere calorie nri, bụ nke nwere ike imebi ihe ọ bụla dị njọ nke mgbakwunye, ma ọ bụ kwa dị mkpirikpi iji chọpụta ọdịiche dị mma ndị nchọpụta ndị ọzọ na-akọ.
Otú ọ dị, ebumnuche bụ isi nke ọmụmụ ahụ bụ ịchọpụta mmetụta ọjọọ nke ọgwụgwọ mmezigharị na usoro obi obi, na ndị na-eme nchọpụta ahụ kpebiri na nsonye nke na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na HCL na caffeine, kwalitere ụfọdụ mgbanwe dị ize ndụ. usoro obi. Ha kwubiri na mgbakwunye nke bekee nke yovilbinehcl kwesịrị iji nlezianya mesoo ya, ọ ghaghị iwepụ ya karịsịa ndị nwere oke nsogbu.
8. Ọ bụ yohimbine ntụ ntụ ntụ ntụ?
Akwukwo aphrodisiac Achorodisiac Akwukwo yohimbine nke Gomode: 98% + di ọcha. uhimbine hcl ntụ ntụ dị mma mgbe ọ na-ere ya n'onwe ya nakwa na usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro. N'agbanyeghị nke ahụ, yohimbine ntụ ntụ dị ike ma nwee ike iji ọgwụ na ọgwụ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe. Ejila ogwu yohimbine mee ihe na ọgwụ ndi ozo ma oburu na dọkita gi choro ya.
ntụ ntụ dị na yohimbine nwekwara ike inwe mmetụta na-adịghị mma mgbe a na-eji ya na-eme ihe dị elu. Adịghị gafere usoro ọgwụgwọ akwadoro maka yohimbine hcl. Ụfọdụ mmetụta ndị nwere mmetụta gụnyere itching, ọbara mgbali elu, nkwụsịtụ, na isi ọwụwa. Mmetụta dị iche iche dị oke ụkọ na usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro.
9. yohimbine ntụ ntụ HCL Danger
Mbara ọbara mgbali elu na ọnụ ọgụgụ ụba obi bụ mmetụta abụọ dịka ma ọ bụ okpukpu abụọ nke ma ọ bụ elimb HCL, dịka NCCAM na ụlọ ọgwụ Mayo. Maịlị yohimbe na yohimbine hcl nwere ike ịghọ ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na ewere ya na ọgwụ ndị a na-atụ aro karịa ya, ya mere kọọrọ dọkịta gị tupu ịmalite ịṅụ ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ ahụ ma soro ntuziaka ya. Dị ka Memorial Sloan-Kettering si kwuo, ndị nwere ịda mbà n'obi, nkà mmụta ọgwụ, ọbara mgbali elu, ma ọ bụ ọrịa nke akụrụ, imeju ma ọ bụ obi kwesịrị izere ịṅụ yohimbe, dị ka ndị inyom dị ime. Maka na ọ na - ejikọta ọtụtụ ụzọ ịgwọ ọgwụ, jụọ dọkịta tupu ewere ntụ ntụ Hhiml ma ọ bụ yohimbine.
10. ude uhimbine ntụ ntụ
Ọbụna na usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro (5.4 mg 3x / day), ntụ ntụ yohimbine nwere otutu mmetụta. Mkpụrụ kacha elu (200-5,000 mg) na-esiwanye ike mmetụta ọ pụkwara ịbụ nsí na ụbụrụ. Nnukwu oke doses (n'elu 5,000 mg) nwere ike igbu.
Mmetụta ndị na-emekarị nke yohimbine hcl ntụ bụ:
- Mmeghachi omume nke ime mmụọ
-Ndị ọbara mgbali elu (ọbara mgbali elu)
-Ndị ụba obi (tachycardia)
Ọtụtụ nchọpụta egosiwo na ntụ ntụ yohimbine na-akwalite omume-na ịṅụ ọgwụ ọjọọ na oke na oke. N'ihi na uhimbine hcl ntụ ntụ na-ebelata clotting, o kwesịrị izere hemophiliacs na ndị na-adịbeghị anya na-awa ahụ. A ghaghị eji ụdị ọbara dị ka aspirin, warfarin, na heparin na ntụ ntụ nke na-eme ka ọkpụkpụ HCL dị na yohimbine. E kwesịghị iji ọgwụ ndị dị na yohimbine were ọgwụ ndị na-eme ka ọbara mgbali elu na obi obi dị ka tricyclic antidepressants.
11. yohimbine hcl ntụ ntụ vs. Yohimbe
Yohimbe ogbugbo, ogbugbo nke evergreen Pausinystalia osisi yohimbe, nke bu ala nke odida anyanwu Afrika, bu isi ihe di iche iche nke yohimbine, nke bu alkaloid. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na e nwere ihe dị na yohimbine ntụ ntụ na yohimbe ogbugba, ha abụghị eziokwu na-agbanwe agbanwe, dịka National National Institute of Health si kwuo, ọ bụ na ha na ọgwụ ọjọọ sitere na yohimbine hcl ntụ, nke a na-akpọ yohimbine ntụ ma na-ere ahịa dị ka ọgwụ ọgwụ.
Dika ulo oru National for Medical Medicine, ma o bu NCCAM, e jiriwo ogbugba yohimbe mee ihe n'achoputa iji nwekwuo ochicho nke nwanyi, karia na nso nso a, e jiriwo ya mee ihe banyere nsogbu nwoke. A na-ejikarị ya eme ihe, ọ bụ ezie na a pụkwara ịkụnye ya na mbadamba nkume ma ọ bụ capsule.
(2) uhiebine ntụ ntụ
icha mmiri dị na yohimbine bụ kemịkal nke nwere ike ịchọta ya na ogbugbo nke osisi yohimbe, dị ka NCCAM. Ọ bụ alkaloid, nke bụ ihe a na-emekarị na-emepụta. Dị ka Encylopaedia Britannica si kwuo, alkaloids-gụnyere ụdị ndị a maara nke ọma dịka morphine na nicotine-nwere ụdị mmetụta dịgasị iche iche nke physiological. N'ime nnyocha ọmụmụ, dịka Ụlọ Nche Na-ahụ Maka Ọrịa Cancer na-echeta, a na-egosiputa uhimbine hcl ntụ ntụ na-emeso ịkwa iko.
(3) uhiebine ntụ ntụ
A na-ere n'okpuru aha njirimara "yohimbine ntụ ntụ" na n'okpuru aha aha gụnyere "Yocon," yohimbine hcl ntụ bụ ọgwụ ọgwụ na-eji ntụ ntụ yohimbine dị ka ihe na-arụsi ọrụ ike, dịka Ụlọ Ọrụ Mayo si kwuo. A na-erekarị ya maka ịgwọ ọrịa. Ọ na - eme ka ọbara na - erugharị ma na - emegharịkwa ya, a pụkwara iji ya dọọda ụmụ akwụkwọ, dị ka ụlọ ọgwụ Mayo. Ọ na-amalite ịrụ ọrụ izu abụọ ma ọ bụ izu atọ mgbe ịmalitere ya. Ụlọọgwụ Mayo na-ekwu na usoro ọgwụgwọ nkịtị maka adịghị ike bụ 5.4 na 6 mg ugboro atọ kwa ụbọchị, mana ị ga-agbaso ntụziaka ịzụta dọkịta gị.
(4) Olee otú Yohimbe na yohimbine ntụ ntụ Ọrụ?
Ebe ọ bụ na ntụ ọka yohimbine sitere na yohimbe, ha nwere usoro yiri nke ahụ. Dị ka Memorial Sloan-Kettering si kwuo, yohimbine hcl powder-and yohimbe, n'ihi na o nwere yohimbine ntụ ntụ-eme dịka monoamine oxidase-ma ọ bụ MAO-inhibitor na onye na-egbochi ndị na-egbochi calcium, ọ na-emekwa ka usoro nhụjuanya a na-ahụ anya. Tụkwasị na nke a, ọ na-eme ka ọbara na-abanye n'ime ahụ anụ ahụ ma na-ebute arịa ọbara ọbara ọbara.
12. Nlezianya na yohimbine ntụ ntụ
A maghị ọtụtụ ntụ ọka yohimbine n'ọtụtụ ngwaahịa n'ihi na a na-akpọkarị ha ezighi ezi. Nnyocha nke 49 yohimbine hcl powder supplements found that only 2 nyere ezigbo ederede na ozi .Ọtụtụ uhie yohimbine si na 0 gaa na 12.1 mg, nke dị elu karịa ụdị a tụrụ aro nke 5.4 mg. N'ime ngwaahịa ndị edepụtara na ọnụ ọgụgụ na-ezighị ezi, ezigbo doses sitere na 23% gaa na 147% nke ọnụahịa ahụ. Mmetụta dị iche iche bụ ihe nchịkọta nke Yohimbe ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ọgwụ ọgwụ yohimbine maka ọgwụ ndị na-ede akwụkwọ na-enweta ihe nchekwa nchekwa dị iche iche ma nwee nkọwa nduzi doro anya karị.
13. yohimbine ntụ ntụ HCL Nyocha
Otu onye ọrụ kwuru na 3-4 mg nke yohimbine hcl ntụsi na-eme ka arụmụka dị mma, kama ọ kpatara mwakpo nchegbu. Onye ọrụ ọzọ kọsara ịṅụ oké mkpọtụ na mmụba ụbụrụ gburugburu 150 na-agba n'otu nkeji dịka 2 awa mgbe ọ na-ewere ntụ ntụ nke yohimbine. Ọtụtụ ndị ọrụ kọrọ na ha nwere ahụmahụ na-ezighị ezi dịka nwakpo nchegbu na ụba obi. Otu onye ọrụ furu efu 17 lbs mgbe ọ na-ewere ntụ ntụ nke yohimbine maka izu abụọ, ma ahụ ọkụ ahụ nwere ahụmahụ, ụra nke ihi ụra, na ụda na ume anụ ahụ.
Ịzụta uhiebine hcl uzuzu ugbua ....
14. uhiebine ntụ ntụ Nsonaazụ
Ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ banyere ntụpọ yohimbine na ebe a, m ghọtara. Enweghị ọtụtụ ihe mgbakwunye anụ ahụ nke ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara na-enyere gị aka idaba ngwa ngwa. Ọ sịrị, ọ bụghị ọrụ ebube. Cheta na ihe mgbakwunye anaghị ewuli nnukwu physiques. Ịrara onwe gị nye ọzụzụ kwesịrị ekwesị.
Nke ahụ kwuru, ebe a bụ ihe ị nwere ike ịtụ anya site yohimbine hcl ntụsi supplementation:
-Anwekwuwanye ike na ike.
-Atụ ntakịrị agụụ.
-Anwekwu mmụba na ọnụ ọgụgụ nke metabolic na izu ike, na isi abụba dị oke mkpa.
Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị ada ụda niile dị na gị, m ghọtara. Ana m akpọ ya ka ọ dị. Nke ahụ kwuru, ọ pụtaghị na ịkwesịrị ịgbakwunye ya na yohimbine hcl. Ọ pụtara na ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji jiri eriri yohimbine mechie na ihe mgbakwunye ndị ọzọ iji mee ka agịga gwuo. Ị na-ahụ, site na onwe ha, ọtụtụ ihe mgbakwunye anụ ahụ nwere ike ịba ụba. Ma buru ndị ziri ezi ọnụ, ọ ga-abụkwa na ị ga-achọpụta mmetụta ha na-emetụta.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na - ejikọta uhimbine ntụ ntụ na mmezi ngwa ngwa na ihe ndị ọzọ na - akwado ndị ọkà mmụta sayensị na - enyere aka na abụba dịka caffeine na synephrine, enwere ike ikwu okwu ahụ. Ma nke ahụ dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ị na-azụkwa ike ma na-eri nri.
15. Kedu ihe mere ndị mmadụ ji atụkwasị na ntụpọ yohimbine ntụ ntụ HCL?
Ogbute Yohimbe abụwo ọgwụgwọ a ma ama maka nrụrụ erectile ruo oge ụfọdụ ugbu a, nke nwere ndekọ dị irè nke irè. Ọfọn, ọ bụ ugbu a kpakpando na-arị elu n'ụwa ihe mgbakwunye ọnwụ, na ya na mmetụta na-ere ọkụ yiri ka a pụrụ ịdabere na ya. N'ụzọ doro anya, nchọpụta na-egosi na ntụpọ yohimbine nwere ike mee ka ọ ghara ịdị ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị mgbagwoju anya. A na-erekwa ya ka ọ bụrụ ihe mgbakwunye iji nyere gị aka ịkwụsị "abụba dị arọ" ngwa ngwa, nke dị ka humbug, n'ezie, mana e nwere ihe ndị na-egosi na sayensị ga-azụghachi ihe a. (More on all this in a minute.) Imirikiti ndị mmadụ na-agbakwunye na ntụlịl na-acha uhie uhie yohimbine ka ha ghara ibu ngwa ngwa, ọ na-arụ ọrụ. Kedu otu, kpọmkwem, na nke ọma? Nọgidenụ na-agụ iji chọpụta.
16. Ihe kacha mma na-eme ka ọ bụrụ ntụ ọka
yohimbine ntụ ntụ
Na-adabere n'ebe ị si
A na-ewere ntụ ntụ elhimbine dịka aphrodisia. Ọ bụrụ na ọ dị, ọtụtụ ndị na-anwụ anwụ na-ewerekwa yohimbine hcl ntụ ntụ iji nweta ihe dị arọ. mmekọahụ ntụ ntụ ma ọ bụ oke ntụ ntụ, ọ bụ ezigbo ntụ ntụ na ahịa. Ya mere, a ga-enwe ọtụtụ ndị na-ere ngwaahịa na yohimbine, otú e si ahọrọ akwa dị elu ma dị ọcha ọcha yohimbine? Nke a bụ nchegbu maka onye ọ bụla n'ime anyị.
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị ọrụ na-echegbu onwe ha banyere ndị na-ebukọrọ ihe dịka a na-agba chalulk AASraw, bụ nke na-enye uwelbine hcl ntụ ntụ, ma ọtụtụ ndị ahịa na-anwale ya, àgwà dị mma a pụkwara ịtụkwasị obi.More maara AASraw, biko clik
Ọnwụ ngwa ngwa ngwa ngwa: Ụdị ụdị ntụ ntụ na-adịrị gị mma? 20 ihe kachasị mkpa Ị ga-achọ ịma gbasara ọkụkọ Lorcaserin HCL
Tags: zụta yohimbine hcl, yohimbine hcl ntụ ntụ, ndị na-emepụta ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ HVL
Yohimbine ntụ ntụ: Uru na ojiji nke Yohimbine
Mgbochi ibu ibu: Ceilistat ntụ ntụ na Orlistat ntụ ntụ	Ịzụta Utu Powderide Online: Jiri, Njikere, Mmetụta mmetụta